Ra’iisal Wasaaraha UK Ee Boris Johnson Oo Jeediyey Qudbaddii Laga Sugayay Iyo Horyaalka Premier League Oo Dib Usii Dhacaya – Heemaal News Network
Ra’iisal Wasaaraha UK Ee Boris Johnson Oo Jeediyey Qudbaddii Laga Sugayay Iyo Horyaalka Premier League Oo Dib Usii Dhacaya
Ra’iisal Wasaaraha UK, Boris Johnson ayaa jeediyey qudbad uu ku shaacinayay tallaabooyinka cusub ee dalkiisu qaadi doono si loo xakameeyo xanuunka fayraska Korona, waxaanu soo bandhigay qorshe shan waji leh oo lagu dabcinayo xayiraadda la saaray dalkaas.
Qudbad qaran oo uu ka jeediyey telefishanka ayaa waxa uu Boris Johnson ku sheegay in lasii adkayn doono tallaabada xakamaynta xanuunka muhiimka u ah ee kala-fogaanshaha bulshada si faafitaankiisa loo yareeyo, laakiin waxa uu fasaxay in qoysaska iyo dadka guryo wadaagta ah ay bannaanada usoo baxi karaan oo ay jimicsiyo ku samayn karaan.
Ra’iisal wasaaruhu ma sheegin waqti cayiman oo la fasixi doono in dad badan ay iskugu yimaaddaan fagaareyaasha sida garoomada ciyaaraha, waxaanu si cad uga soo horjeedsaday in la qaado xayiraadaha ciyaaraha Premier League, isaga oo soo jeediyey in la raaci doono tilmaamo dheeraad ah oo ay dawladdu soo saari doonto ka hor inta aanu dib u bilaabmin horyaalka hakadka la geliyey bishii March.
Xayiraadaha ayaa sii jiri doona illaa laga gaadhayo June 1, taas oo ka dhigan in horyaalka Premier League ay suurtogal tahay inuu dib uga dhaco horraanta bisha June oo markii hore lagu waday, laakiin uu badhtamaheeda illaa aakhirkeeda si rasmi ah u bilaabmo.
Warkan ayaa yimid maalin ka hor kulanka Isniinta berri ee Premier League iyo 20-ka kooxood ee horyaalka, kaas oo ay kaga arrinsanayaan mashruuca loogu magaca-daray ‘Dibu-bilaabista’ ee la doonayo in garoomo dhex-dhexaad ah kulamada hadhay lagu ciyaaro, iyadoo Salaasada na lagala hadli doono ciyaartoyda oo sida ay arrintani ku hirgelayso macluumaad laga siin doono.
Kooxaha Premier League ayay ka muuqataa inay si cad iskugu khilaafsan yihiin qodobka dhigaya in garoomo dhex-dhexaad ah lagu ciyaaro, waxaana kasoo horjeeda naadiyada brighton, Aston Villa iyo Watford oo sidoo kalena dabada ku haya saddexda kooxood ee ugu hooseeya miiska kala-sarraynta iyo laba naadi oo kale oo aan la magacaabin.
Dhinaca kale, walaac cusub oo dhinaca badqabka caafimaadka ah ayaa soo kordhay, waxaana kooxda Brighton ay shaacisay in saddex ka mid ah ciyaartoygeeda laga helay xanuunka Fayraska Korona, kuwaas oo ay gelinayso 14 maalmood oo karantiil ah.
Xaaladda cusub ee timid ayaa kulanka Isniinta lagu gorgeyn doonaa, waxaana la isla eegi doonaa sida ay wali kooxuhu usii samayn karayaan taxadar dheeraad ah inkasta oo Arsenal, Tottenham iyo West Ham ay hore ugu soo laabteen tababarka oo ciyaartoy kasta meel gaar ah oo garoonka carbiska dhexdiisa ah uu ku tababaranayo iyadoo macallimiintuna dusha ka fiirinayaan.
Kulanka berri ayaa waxa kale oo laga filayaa in la iskula soo qaado xilliga suurtogalka ah ee horyaalka dib loo bilaabayo, taas oo haddii la isla qaato waqti la isla ishaari doono.
Si kastaba, Premier League iyo horyaallada kale ee LaLiga iyo Serie A ayaa waxay tixraac ka dhiganayaan horyaalka waddanka Germany ee Bundesliga oo Sabtida soo socota dib u bilaabkmi doona.
Dhalinyarada Boorama Oo Ka Hadlay Dhaca Loo Gaystay Suldaan Abshir Iyo Xadhiga Qoraa Unity
Silvia Romano Oo Xaqiijisay In Ay Qaadatay Diinta Islaamka